जब तपाईं मेडिकल स्कुलमा लागी रुचि राख्नुहुन्छ, तर तपाईलाई कुनै किसिमको आवास चाहिन्छ भने, यो MCAT लिनु भएको बेला तपाइँसँग कुनै सुचारु छैन जस्तो देखिन्छ। तपाईं थप हुन सक्नुहुन्न। अन्य मान्य परीक्षणहरूमा जस्तै - SAT, LSAT , GRE - आवास पनि MCAT को लागि उपलब्ध छन्। यदि तपाईं कसै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने केवल एक चीज आवश्यक छ जुन MCAT आवासको आवश्यकता छ, तपाईंले कि प्रकारको दर्ता सुरक्षित गर्न आवश्यक कदमहरू पत्ता लगाउनुहुन्छ।
यो लेख जहाँ काम आउँछ।
जानकारी उपलब्ध MCAT आवासीय प्रकारका प्रकारहरू र तपाईलाई आफैले आफुलाई सुरक्षित गर्नका लागि आवश्यक कुराहरू बारे जानकारीको लागि तल हेर्नुहोस्।
MCAT दर्ता FAQ
कसलाई MCAT मकान चाहिन्छ?
परीक्षकहरु जो एक चिकित्सा अवस्था वा अक्षमता हो जसले MCAT परीक्षण सर्तहरू परिवर्तन गर्दछ (वा तिनीहरूसँग सोच्नुहोस्) अगाडि बढ्नु पर्छ र एक MCAT आवासको लागि आवेदन गर्नु पर्छ। AAMC निम्नलिखित नियमहरू वा असक्षमताको प्रतिनिधिको रूपमा सूचीबद्ध गर्दछ जुन परीक्षण परीक्षणको लागि योग्य हुन सक्छ। उनीहरूलाई ध्यान दिनुहोस्, सूची सूची समावेश छैन, त्यसैले यदि तपाईंलाई विश्वास छ कि तपाईंलाई MCAT परिवर्तन चाहिन्छ भने, तपाइँलाई लागू गर्नु पर्छ यदि तपाइँको विशेष अक्षमता वा शर्त सूचीबद्ध छैन भने:
ध्यान-घाटा हाइपरक्टिविटी विकार (ADHD)
MCAT आवास उपलब्ध
आवास अनुरोध गर्ने व्यक्तिको आधारमा, AAMC ले MCC थप पहुँचयोग्य बनाउन मद्दत गर्न चीजहरू प्रस्ताव गर्नेछ। निम्न सूची केवल उनीहरूको लागि के गर्न सक्छन् को एक नमूना हो:
थप परीक्षण समय
अलग परीक्षण कक्ष
विशेष वस्तुहरू जस्तै ईश्वर, पानी वा कडा कैंडी परीक्षण कक्षमा ल्याउन अनुमति
यदि तपाइँ यी आवासको एक बाहिर बाहिर परीक्षण स्थितिको आवश्यकता पर्दछ भने AAMC बनाउन तयार छ, तपाइँले तपाइँको अनुप्रयोगमा यो स्पष्ट गर्न आवश्यक पर्दछ ताकि उनीहरूले तपाइँका आवश्यकताहरूको समीक्षा गर्न र निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ।
MCAT आवास अनुप्रयोग प्रक्रिया
MCAT आवास सुरक्षित गर्न बल रोलिङ प्राप्त गर्न, तपाईंले निम्न चरणहरू पूरा गर्न आवश्यक छ।
AAMC ID को लागि दर्ता गर्नुहोस् । जब तपाई MCAT को लागि दर्ता गर्नुहुन्छ भने तपाईले यो आईडी प्रयोग गर्नुहुनेछ, आवासको लागी आवेदन गर्नुहोस्, मेडिकल स्कूलमा आवेदन दिनुहोस्, अवशिष्टता र अधिकका लागी आवेदन दिनुहोस्। त्यसैले, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको प्रयोगकर्ता आईडी र पासवर्ड एक हो कि तपाईंले सम्झनु भएको छ र फेरि देख्न मन छैन।
MCAT को लागि दर्ता गर्नुहोस् । तपाइँ पहिल्यै नियमित रूपमा MCAT परीक्षण सीटको लागि दर्ता गर्न आवश्यक छ, त्यसैले तपाईले मनपर्ने मिति र समयमा परीक्षण लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाइँको आवास अनुरोध अस्वीकार गरिएको छ भने। दर्जनौं परीक्षण मितिहरू र समयहरू छनौट गर्नका लागि, तपाइँलाई पत्ता लगाउन निश्चित हुनुहुनेछ कि तपाइँलाई उत्तमसँग मिलाउनुहुन्छ।
आवास अनुरोध समय फ्रेम र प्रकारहरूको समीक्षा गर्नुहोस् । त्यहाँ विभिन्न समयहरू छन् जुन तपाईले तपाइँको अनुमोदित गर्न खोज्नु भएको आधारमा पेश गर्नु पर्छ। धेरै चाहिन्छ 60 दिन, त्यसैले तपाईंको अनुसन्धान गर्नुहोस्!
तपाईंको प्रकारको हानिको लागी अनुप्रयोग आवश्यकताहरु पढ्नुहोस्। यसमा विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् कि तपाइँ स्थायी शारीरिक (मधुमेह, अस्थमा), एक चोट (एक टूटाईएको टाउको) वा सिकाउने असक्षम छ भन्ने शारीरिक हानिकारक हो कि आधारित हो। प्रत्येक आवेदनमा व्यक्तिगतकृत आवरण पत्र समावेश हुनु पर्छ जुन तपाइँको दबाइ र कार्यात्मक हानिको साथ चिकित्सा दस्तावेज र AAMC द्वारा प्रदान गरिएको मूल्याङ्कनको वर्णन गर्दछ।
तपाईंको आवेदन पेश गर्नुहोस्। तपाईंले चाँही क्षेत्र रजिष्ट्रेसन म्यादको समय भन्दा 60 दिन भन्दा पछिको आवासको लागि आफ्नो आवेदन आवश्यक छ। चाँदी क्षेत्र रजिस्टर के हो?
निर्णयको लागि पर्खनुहोस्! तपाईले MCAT आवास ऑनलाइनहरू मार्फत एउटा पत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईंको अनुरोधलाई स्वीकृत गरिएको छ वा अस्वीकार गरिएको छ। यदि तपाइँ अनुमोदन गरिएको छ भने, तपाईंको अर्को चरणले तपाइँको सीट समायोजित परीक्षकको रूपमा पुष्टि गर्नेछ। यदि तपाईं अस्वीकृत हुनुहुन्छ भने, केवल तपाईंको मानक परीक्षण समयको लागि देखाउनुहोस्।
MCAT आवास प्रश्नहरू
AAMC को लागि एक प्रश्न पाउनुभयो? तपाईं या त तिनीहरूलाई ईमेल वा मेल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
MCAT कार्यालय को सशुल्क परीक्षा
Attn: Saresa डेविस, मेलरूम पर्यवेक्षक
2450 एन स्ट्रीट, NW
वाशिंगटन, डीसी 20037
मुख्य आइडिया कार्यपत्र 1 उत्तर
4 राम्रो तरिका बन्ने तरिका-लेकर
सुरुवात संवादहरू - एक भोजनालयमा
सांप जादू र प्रतीकवाद
अल ग्रीनको शीर्ष दस सबैभन्दा ठूलो हिट्स
मार्टिन लूथर किंग जूनियर को हत्या
शिकागो प्रवेश को कला संस्थान को स्कूल
कति जना महिला आविष्कारहरू छन्?
मेक्सिकोको इम्प्रेशन कार्लोटा
ओबरलिन कलेज प्रवेश
सर्वश्रेष्ठ स्लेयर एल्बमहरू
Lenoir-Rhyne University Admissions
हाई स्पीड रेलवे
Dumbbell फ्लाई व्यायाम कसरी प्रदर्शन गर्ने
चर्चहरूको लागि कर छूट उपलब्ध छ
कृत्रिम चयन: मनमोहक विशेषताहरूको लागि प्रजनन
Ichthyosaur तस्वीरहरू र प्रोफाईलहरू
सोडियम हाइड्रोक्साइड वा NaOH समाधान तयार गर्ने
म्यागिकल युल उपहार बनाउने उपहार
फैटी एसिड परिभाषा
ध्वनिक गिटारका लागि शीर्ष क्लासिक देश गीतहरू
निस्सन्देही शरीर - कामको भौतिकी समस्या
हॉकी स्केट्स किन्नुहोस्
विशेष प्रदर्शनी ग्यालरी: डबल लिक: मोनिट देखि लिचटेनस्टीन सम्म
तर्कमा विज्ञापन अवशोषण घटाउनुहोस्
क्यानाडा कलाकार लान्डर हैरिस को चित्रहरु
तपाईंको उत्सवलाई हल्काउन मजेदार एनिमेसनको उद्धरण प्रयोग गर्नुहोस्